mShop - ဖုန်းပစ္စည်းများ
Meizu M2 Black Ram2Rom 16GB, andriod version 5.1(Lollipop)
!!! 3D VR Box & Remote !!! ဆောင်းအိပ်မက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်ဖို့ကတော့ 3D VR နဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ခံစားလွင့်မျောဖို့တော့ လိုမယ်တဲ့။
3D VR-BOX+Remote (Friday ပို့ခ အခမဲ့) 3D ရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြောင်းလဲကြည့်ရှုရင်း အဖြစ်အပျက်အသစ် အသစ်တွေထဲ လိုက်ပါစီးမျောဖို့ဆို OK, Ready !
True Smart Max 4.0 3G Network, 2SIM, 5MP camera
Princess Photo Light Night ပဲထွက်ထွက် ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြည့် နေ့လည်ဘက်အပြင်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ် အသင့်ဆောင်သွားနိုင်ပါတဲ့ LED Light လေးရှိနေပါပြီရှင့်
3D VR Phone Case Remote မလို့ မျက်နှာနဲ့ကပ်ထားစရာမလို မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားမလို အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ 3D Case လေးပါရှင့်
Phone Game Joy Stick ML ဆော့ရင် phone Screen မရွေ့ဖြစ်နေလို့စိတ်မပူပါနဲ့Game ဆော့ရင်သုံးလို့ရတဲ့ Game Joy Stick လေးရှိနေပါပြီရှင့်
Fresh Bluetooth Ear Phone အသံကြည်လင်ပြတ်သားပြီးနေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အလွယ်တကူBluetoothချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့Fresh Bluetooth Ear Phoneလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်
အသေးစားဒေါက် သောကြာနေ့တိုင်း Promotion များစွာရှိပါသည်.
Huawei GR5 2017(3GB,32GB) Gold Ram3Rom 32, Main camera: 12 MP +2 MP camera Secondary camera: 8 MP camera
Remax 3.1A Charger Fast Charger
Remax p4 Selfie Stick သောကြာနေ့တိုင်း ပို့ခ အခမဲ့ ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်
360 phone Stand သောကြာနေ့တိုင်းပို့ခ Free
Huawei G730U White Ram 1GB, Rom 4GB, CPU - Quad Core 1.3GHz
Meizu M5 Note Gold 5.5-inch screen,18W fast charging 13 megapixel camera 1.8GHz A53 cores 3GB/4GB RAM
Oppo F3 Plus Gold Rear camera	16-megapixel Flash	Yes Front camera	16-megapixel Ram 4GB Rom 64GB
Oppo F1 Gold Ram 3GB, Rom 32, Main Camera 13MP
Remax Gold Cable Fast Charging
Remax Laser Cable (rc035i) High Speed Charger
Remax Cable (rc043) အားဝင်မှုမြန်ဆန်ခြင်း
Vivo V5 Plus Gold အရမ်းလန်းတဲ့ 20MP Camera နဲ့ Ram 4GB Rom 64GB, ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေဆော့နိုင်မယ့် အပြင် Finger Print ကလဲလန်ထွက်ပဲနော့
Vivo Y21 Gold Ram 1GB, Rom 16GB , Quad Core 1.3 GHz ဈေးနှုန်းနဲ့ အရမ်းတန်တယ်နော်